1. Qaar ka mid ah dadka isticmaala Mac ee aan wali aqoon sida loo qaado shaashadda ama si fudud ugu yeeraan shaashadda. Kuwa raadinaya hab ay ku qabtaan shaashadaha shaashadda, waa inaad akhridaa maqaalkan .. Sababtoo ah sawir ka qaadashada shaashadda daaqadda oo dhan ama qayb uun shaashadda ah Sidaad u maleynaysid uma adag! Sida loo qaado shaashad shaashad ah Mac Furayaasha ugu muhiimsan ee aan u baahan nahay in aan adeegsanno waa: ● amarka ● wareegga ● lambarka 3 ● lambarka 4 ● lambarka 6 ● barxadda furayaashaas lagu isticmaalo. Iyo sida loogu helo dhamaan moodooyinka Mac sida Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini. Aynu ku sii socono qaababka qaarkood ee shaashadaha looga qaado. Midkee ayaad u baahan tahay inaad riixdo isla waqtigaas? Oo ma waxaa jira qaab kasta oo aan ku qaadan karno shaashadda?
2. Soo qaado sawirka halka aad rabto adoo u cusbooneysiinaya gobolkiisa. Riix oo hayso Furaha Command iyo Shift oo taabo nambarka 4. Markii aad isku mar riixdo, Mac-kaaga wuxuu tusayaa a + calaamadda, ka dibna dhagsii oo hay jiirka oo jiido meesha aad rabto Sawir markaa Marka meesha la doonayo la dhammeeyo, sii daa jiirka, ku habboon marka aan dooneyno inaan qabsanno meel cayiman. Markaad maqasho dhawaq "snap" ah, waxay ka dhigan tahay in qabashadii la dhammaystiray. Sawirka la qabtay ayaa isla markiiba lagu keydin doonaa desktop-ka.
3. Soo qaad sawirka daaqada hada socota. Si aad uhesho oo aad uqabato furayaasha Command iyo Shift, dhagsii lambarka 4 oo sii daa dhamaan gacmaha. Waxaa ku xiga Spacebar (+ ayaa soo muuqan doona haddii aadan riixin Spacebar) marka la sameynayo sawirka kamaradda. Guji daaqadda la doonayo si aad u qabato sawirka, kaas oo ku habboon qabashada daaqad gaar ah oo codsi kasta ah. Markaad maqasho dhawaq "snap" ah, waxay ka dhigan tahay in qabashadii la dhammaystiray. Sawirka la qabtay ayaa isla markiiba lagu keydin doonaa desktop-ka.
4. Qaado shaashadda dhammaan Mac-ga shaashad buuxda Si aad tan u sameyso, riix oo hayso amarka Furaha iyo Shift, ka dibna taabo nambarka 3. Tani waxay u oggolaaneysaa in lagu qaato shaashad buuxda.Wax kasta oo ka furan shaashaddaas ayaa la soo bandhigi doonaa gebi ahaanba. Ku habboon haddii aad rabto inaad aragto shaashadda oo dhan. Markaad maqasho dhawaq "snap" ah, waxay ka dhigan tahay in qabashadii la dhammaystiray. Sawirka la qabtay ayaa isla markiiba lagu keydin doonaa desktop-ka.
5. Sawir taabashada taabashada ah ee 'Bar Bar' ee 'MacBook Pro' oo la socota 'Touch Bar', haddii qof uu adeegsanayo MacBook Pro oo ku yimid Touch Bar, waxoogaa ayuu horumarsan doonaa maxaa yeelay Mac-na wuxuu qaadan karaa shaashadda shaashadda 'Touch Bar' sidoo kale !! Wow. Sidee loo riixaa oo loo hayaa furayaasha Command iyo Shift oo la dhajiyaa lambarka 6 markaad maqasho dhawaq "Snap" macnaheedu waa in qabashadii ay dhameystirtay. Sawirka la qabtay ayaa isla markiiba lagu keydin doonaa Desktop-ka, farsamo kale ayaa ah in la soo jeediyo hadii aad rabto inaad si deg deg ah wax uga bedesho sawirka la qabtay, waad sameyn kartaa marka koofiyadu dhamaato, maxaa yeelay Mac-ga ayaa sawirka ina tusaya ka hor inta uusan ku keydin Desktop-ka. Haddii aad rabto inaad wax qorto ama aad rabto inaad calaamadeyso qodobbada muhiimka ah Isla markiiba waa la hagaajin karaa, aad ugu habboon qof kasta oo doonaya inuu ogaado farsamooyinka kale ee isticmaalka Mac, ha iloobin inaad riixdo oo aad wada raacdo. Hubso inaad haysato farsamooyin badan oo wanaagsan!